Thermorecetas otu isiokwu - Osi ite na Thermomix | Usoro ọgwụgwọ
Thermorecetas bụ na-eduga blog banyere Ezi ntụziaka emere na Thermomix na Spain na otu n’ime ihe ndị kasị mkpa na kichin larịị ke ofụri ofụri. Ọ bụ ebe a na-enwe nzukọ kwa ụbọchị maka ndị niile hụrụ nri n'anya ma ọkachasị ndị niile na-eji Thermomix.
Weebụ malitere na 2010 Ma ebe ọ bụ na ụbọchị ọ bụla anyị na-ebipụta otu (ma ọ bụ ọtụtụ) mbụ Ezi ntụziaka nke mere na onye ọ bụla nwere ike ime ka ha kichin. Anyị nwere usoro nri n'ụdị niile, maka ihe masịrị ha niile ma gbanwee ya na ọkwa niile, site na nkwadebe dị mgbagwoju anya na nke dị mfe nke enwere ike ime na erughị nkeji iri atọ yana iji isi nri esi nri.
Ọzọkwa anyị amalitela ọtụtụ akwụkwọ dịka ị si hụ na ngalaba a. N'oge anyị nwere Akwụkwọ 2 bipụtara na Anaya na-ere nke ọma na anyị na-wepụtara ọtụtụ akwụkwọ na dijitalụ format dị ka akwụkwọ nke Gosipụta usoro nri iji mee ihe na-erughị nkeji iri atọ. Anyị esorokwa ndị na-abụghị ndị ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na-eme ka a dị n'ubi, akpọnwụwo akwụkwọ iji nyere aka nyeju ndị nọ na mkpa aka.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ụzọ esi esi nri niile, ugbu a ị ga - eme ya site na itinye ngalaba nke ukwuu-iwu Ezi ntụziaka ma ọ bụ na Ezi ntụziaka nyere iwu site isiokwu. Also nwekwara ike ịhụ isiokwu ndị ọzọ anyị na-arụ na weebụ maka ekele ngalaba anyi.
Ntụziaka niile na-apụta na Thermorecetas akwadebewo site n'aka ndị na-esi nri anyị. Ha bụ mkpụrụ obi nke weebụsaịtị a ma gosipụta ikike na ahụmịhe ha dị ka osi ite na nri ọ bụla ha mere. Ke ikpehe emi Anyị na-ewebata gị na ndị otu nchịkọta akụkọ anyị ka ị nwee ike ịmata ya na ị na-eche na a website n'ụlọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ isonyere anyị ugbu a ị nwere ike ịme ya emecha ụdị a ma ozugbo anyị mere anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo enwere ike.
Aha m bụ Irene, amụrụ m na Madrid ma enwere m ogo na ntụgharị na Ntugharị (ọ bụ ezie na taa m na-arụ ọrụ na ụwa nke nkwado mba ụwa). Ugbu a, abụ m onye nhazi nke Thermorecetas.com, blọgụ nke mụ na ya rụkọrọ ọrụ ọtụtụ afọ (agbanyeghị na m bụ onye na-eso ụzọ na-eguzosi ike n'ihe ogologo oge gara aga). N'ebe a, achọtawo m ebe magburu onwe ya nke mere ka m zute ndị mmadụ ma mụta ọtụtụ usoro na usoro aghụghọ. Ọchịchọ m maka isi nri na-esite mgbe m dị obere mgbe m nyere nne m aka isi nri. N'ụlọ m, efere esitere n'akụkụ ụwa niile akwadoro, nke a, yana oke ịhụnanya m nwere maka njem na-apụ apụ na ihe niile metụtara ụwa nri, emeela taa otu n'ime nnukwu ihe omume m. N'ezie, amalitere m na ụwa blọgụ afọ ole na ole gara aga site na blog nri m Sabor Mmetụta (www.saborimpresion.blogspot.com). Emechara m zute Thermomix ahụ, amatakwara m na ọ ga-abụ nnukwu onye enyemaka m na kichin. Taa, enweghị m ike iche n'echiche na-enweghị ya.
Aha m bụ Ascen na enwere m ogo na Mgbasa Ozi na Mmekọrịta Ọha. Enwere m nri, eserese na ịnụ ụtọ ụmụntakịrị m anọ. Na December 2011 mụ na ezinụlọ m kwagara Parma (Italytali). N'ebe a, m gara n'ihu na-eme Spanish nri mana m na-akwadebe ụdị nri sitere na mba a, ọkachasị site na mpaghara Parma - ndị Parmes na-etu ọnụ na ha bụ "ndagwurugwu nri" na nnukwu gastronomic nke ...tali ... -. M ga-anwa ịnye gị omenaala nri gị, n'ezie, mgbe niile na Thermomix anyị ma ọ bụ ndị Bimby, dị ka ndị Italitali kwuru.
Amụrụ m na Asturias na 1976. Agụrụ m Nzụkọ Azụmaahịa na Ọrụ Ndị Nlegharị na Coruña ma ugbu a, ana m arụ ọrụ dịka onye na-enye ndị njem nleta na mpaghara Valencia. Abụ m nwa amaala ụwa niile ma m na-ebu foto, ihe ncheta na usoro isi nri site na ebe a na akpa akwa m. A bụm n’ezinụlọ nke oge dị ukwuu, nke ọma na nke ọjọọ, n’agagharị na tebụl, yabụ kemgbe m dị obere, kichin adịla na ndụ m. Mana obi abụọ adịghị ya, agụụ mmụba m bịara na mbata nke Thermomix n'ụlọ m. Mgbe ahụ ka e kere eke nke blog La Cuchara Caprichosa (http://www.lacucharacaprichosa.com). Ọ bụ nnukwu ịhụnanya ọzọ m nwere ọbụlagodi na enwere m ntakịrị agbahapụ. Abụ m akụkụ nke otu ọmarịcha otu na Thermorecetas, nke m na-emekọ ọnụ dị ka onye editọ. Kedu ihe ọzọ m nwere ike ịchọrọ ma ọ bụrụ na agụụ m bụ akụkụ nke ọrụ m na ọrụ m nke agụụ m?
Amalitere m site na mmasi m nwere ike ịme achịcha site na mgbe m dị afọ iri na isii, kemgbe ahụ akwụsịghị m ịgụ, nyocha na ịmụ akwụkwọ. Ọ bụụrụ m ihe ịma aka nye m ịrara onwe m nye ya n'ụzọ zuru ezu na ezigbo nchọta iji nweta Thermomix na kichin m. Ọ bụ ihe ndị ọzọ mfe ime ezigbo nri na ọ kọwakwuru ihe ọmụma m banyere isi nri, a ịma aka m na-enwe ike ịnọgide na-ezi mfe ma ihe Ezi ntụziaka.
Onye ndezi gara aga
Enwere m isi nri. Na dee. Yabụ kedu ihe karịa blọgụ isi nri? Thermorecetas jikọtara ọrụ m na agụụ m. Ọ bụ ya mere m ji eso gị kerịta usoro izizi m kachasị mma, ejiri ihe ndị dị mkpa, yana iji ịnụ ọkụ n'obi mee ka ị masịrị ha.
Ọnye na -bụ Silvia Benito?
Aha m bụ Silvia Benito yana Elena m malitere blog a na 2010. Isi nri na karịsịa Thermomix bụ nnukwu agụụ m na ọ na-egosi. Anọ m na-etolite nke nta nke nta, na-amụta ụzọ nke ịkụziri onwe m; ọpụrụiche m bụ desserts .... yum yum yum.
Aha m bụ Elena na otu n’ime agụụ m na-esi nri, mana ọ kachasị achịcha. Kemgbe m nwere Thermomix, agụụ a toro ma igwe a magburu onwe ya aghọwo ihe dị mkpa na kichin m.
Dabere na enyo! Afọ ole na ole gara aga, amalitere m inwe mmasị na ụwa nke gastronomy na otu esi esi kichin ọ bụla. Me, onye naanị meghere akpa itinye na ngwa ndakwa nri na-eme ka ọ bụrụ ihe ndabere nke nri m. Site na onye na-ede blọgụ a ma ama, amalitere m iji kichin mee ihe karịa naanị mepee ngwa nju oyi ma jide ihe ọ bụla. Mgbe afọ ole na ole gachara, naanị m, ewezuga ngwa ụlọ oge ụfọdụ, enwetara m rọbọt kichin a ma ama nke m ji wee mepụta ọtụtụ usoro m na-eweta na ọwa ahụ, nke ojiji ya na-eju m anya kwa ụbọchị. Nke mere na achọghị m ịkwụsị ịkekọrịta ya. Na-anabata gị! Ọ bụ ezie na ọ na-amasị m isi nri n’ozuzu, ruo afọ ole na ole, agbanweela m ụfọdụ n ’ụdị nri m na-eri n’ihi mmalite ụdị ndụ na-adabere na egwuregwu na ahụike. Ọtụtụ n'ime usoro nri m na-etolite dabere na nkà ihe ọmụma nke iri ihe anyị chọrọ n'ezie dabere na njirisi na mkpa anyị, na-enyefe ihe mgbakwunye na ngwaahịa ndị na-adịghị ahụ ike dịka nnukwu ụdị na-ere anyị mgbe ụfọdụ. Ọ bụ maka ịmegharị usoro nri site na itinye ụfọdụ ihe maka ndị ọzọ na-aga nke ọma (shuga maka ihe ndị na-eme ka ahụike dị ụtọ dị ka stevia ma ọ bụ ntụ ọka wit dum karịa ndị a nụchara anụcha).
Omume ọma González
Cook nke agụụ na ọrụ. Ebe ọ bụ na amalitere m iji Thermomix ọtụtụ afọ gara aga, anyị anọpụla iche na kichin ... na ọtụtụ afọ na-abịa! Na Thermorecetas M na-ebipụta usoro nri m kachasị mma iji nyere ndị niile na-amalite na kichin aka ị nweta nke ọ bụla n'ime ha. Ànyị na-agụ?
Black Friday na ngwaahịa kichin na ọtụtụ ndị ọzọ!